येशू ख्रीष्ट प्रतिज्ञा गरिएको मसीह | बाइबलले सिकाउँछ
हामीले मसीह चिन्न सकोस् भनेर यहोवा परमेश्वरले तिनको जन्म, तिनले गर्ने सेवा र तिनको मृत्युबारे थुप्रै भविष्यवाणी लेख्न लगाउनुभयो। ती सबै भविष्यवाणी येशू ख्रीष्टमा पूरा भए। ती भविष्यवाणीमा दिइएका जानकारीहरू सही अनि विस्तृत थिए। उदाहरणको लागि मसीहको जन्म र बाल्यकालसित सम्बन्धित केही भविष्यवाणी विचार गरौं।
भविष्यवक्ता यशैयाले मसीहको जन्म राजा दाऊदको परिवारमा हुनेछ भनेका थिए। (यशैया ९:७) हुन पनि येशूको जन्म दाऊदको घरानामै भयो।—मत्ती १:१, ६-१७.
अर्को एक जना भविष्यवक्ता मीकाले मसीहको जन्म “बेतलेहेम एप्राता”-मा हुनेछ अनि पछि गएर तिनी राजा हुनेछन्‌ भनेर बताए। (मीका ५:२) येशूको जन्म हुँदा इस्राएलमा बेतलेहेम नामका दुइटा सहर थिए। एउटा, उत्तरी भागमा नासरत नजिकै थियो भने अर्कोचाहिं यहूदाको यरूशलेम नजिकै। यरूशलेम नजिकैको बेतलेहेमलाई पहिला एप्राता भनिन्थ्यो। भविष्यवाणी गरिएझैं येशूको जन्म त्यही एप्राता सहरमा भयो!—मत्ती २:१.
बाइबलको अर्को भविष्यवाणीअनुसार परमेश्वरको छोरालाई “मिश्र देशबाट” बोलाइने थियो। येशूका आमाबुबाले तिनी जन्मेको केही समयपछि तिनलाई मिश्रमा लगे। यहूदाका राजा हेरोदको मृत्युपछि बालक येशूलाई लिएर उनीहरू मिश्रबाट फर्के। यसरी भविष्यवाणी पूरा भयो।—होशे ११:१; मत्ती २:१५.
पृष्ठ २०० को पेटीमा मसीहसम्बन्धी अरू भविष्यवाणी दिइएका छन्‌। भविष्यवाणी लेखिएको पदलाई पूर्ति भएको पदसित दाँजेर हेर्नुहोस्। यसो गर्दा परमेश्वरको वचनमाथि तपाईंको विश्वास अझ बलियो हुनेछ।
यी भविष्यवाणी येशू जन्मनुभन्दा सयौं वर्षअघि लेखिएका थिए भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। येशूले यसो भन्नुभयो: “मोशाको व्यवस्था, भविष्यवक्ताहरूको लेखोट र भजनहरूमा मेरो विषयमा लेखिएका सबै कुरा पूरा हुनै पर्छ।” (लूका २४:४४) यी सबै भविष्यवाणीका एक-एक विवरण कसरी पूरा भए, तपाईंले आफ्नै बाइबलमा जाँचेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहूदाको कुलमा जन्म
कन्या केटीको कोखबाट जन्म
राजा दाऊदको वंश
मत्ती १:१, ६-१७
यहोवाले आफ्नो छोरा भनी घोषणा गर्नुभयो
मानिसहरूले विश्वास गरेनन्‌
यूहन्ना १२:३७, ३८
गधामाथि सवार भएर यरूशलेम प्रवेश गर्नुभयो
घनिष्ठ साथीबाट विश्वासघात
यूहन्ना १३:१८, २१-३०
तीस टुक्रा चाँदीको लागि धोका दिइयो
आरोप लगाउनेहरूसामु मुख खोल्नुभएन
उहाँको लुगाको लागि गोला हालियो
खम्बामा टाँगिंदा उहाँको अपमान
भजन २२:७, ८
उहाँको एउटै हड्डी भाँचिएन
यूहन्ना १९:३३, ३६
धनी मानिसको चिहानमा राखियो
शरीर कुहिनुअघि ब्यूँताइनुभयो
प्रेषित २:२४, २७
परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ बस्नुभयो
शेयर गर्ने शेयर गर्ने येशू ख्रीष्ट प्रतिज्ञा गरिएको मसीह